Ukufunda: ukuphuza izilwanyana ezingenakwenzekayo Umvuzo weZiseko
Ikhaya nokufunda Ukungaphumeleli
"Abafundi abangafundanga kwi21ste inkulungwane abayi kuba ngabo abangakwazi ukufunda nokubhala, kodwa abo bangakwazi ukufunda, bafunde kwaye bafunde."
- UAlvin Toffler, ingcali ngekamva (Toffler, A. 1970 "Umothuko wexesha elizayo"), Random House
Imiqathango kunye nezilingo zisebenza ngokuqhelekileyo. Ukunikezelwa oko sikuyazi malunga neuroplasticity, kukho ithemba lokuba sinokungaqhelekanga kwimikhwa engasinceda siphumelele. Nangona iimophu zengqondo esiye zadala azizange zenzeke, ziyakunciphisa ngokungasebenzisi. Ukunikela ingqwalasela ekuphuhliseni imikhwa emitsha kukuncinci ukutshiza izityalo ezintsha nokuvumela ukuba abantu abadala bome. Kuthatha ixesha kunye nemigudu eqhubekayo yokutshintsha ukuziphatha njengememori yezinto ezonwabileyo kunye neengcinga ezibangela ukuba ezo zikhumbuzo zisoloko zisilingela. Ngolwazi nenkxaso, sinokufezekisa utshintsho olukhulu.
Ukuqaphela umlutha-Umnye-mzekelo wesimo esithi "Ukutshabalala sisifo esisisiseko, esingasigxina somvuzo wengqondo, ukukhuthaza, inkumbulo kunye neesekethe ezinxulumene ..." kukuqala kwangaphambili kwaye kunokunceda ukususa intshutshiso edla ngokuqhotyoshelana nokulutha kwexesha elidlulileyo njengamanye uhlobo lokuziphatha okusilelayo okanye ubuthathaka. Kusinceda sibe nengqiqo nangendlela ebonakalayo yokunyanzelisa i-intanethi eyenziwa ngabantu abaninzi. Ubungcali obuhle kakhulu kwi-IT nakwiimveliso zentengiso ziqinisekisile oko.
Inyaniso yokuba umlutha yinkqubo, ukuziphatha okufundileyo, kunokusiqaphela iindlela zokuthintela ngaphambi kokuba thina, okanye abo abasondeleyo, silawule kude kakhulu nokulawulwa, njengoko indlela yokubuya ingaba yinde kwaye iyanzima.
Ibali legrog isifundo sokufunda esincedo apha. Ibali liya kuba abaphandi babeka igqabi ngamanzi ashushu. Yakhawuleza yaphuma, impembelelo yendalo yengqondo iyayixhalabisa ingozi. Xa bebeka i-frog emanzini abandayo kodwa ke kwavutha kakhulu ukushisa, i-frog yayibilisiwe kwaye yafa. Ijegi yayijwayele ukunyuka okuthe ngcipheko ekutshiseni kwaye ukuphendulwa kwengcinezelo yendalo yaba yinto engalungile ekusindiseni ubomi bayo. Oku kunokwenzeka nakubani na xa silahlekelwa sisithakazelo kwizinto ezisongelayo kwaye impendulo yethu yokunyamezela ingaphumeleli ukusigcina sikhuselekile.
<< Imifanekiso engamanyala kunye neTyala leSondo kwangoko Iziyobisi ezikwi-Intanethi >>